Paradox - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > တိုတောင်းသောအတွေး > ဝိရောဓိ
ပေါလုသည် ယုံကြည်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ (သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း) သည် အရာခပ်သိမ်း၏နောက်ကွယ်မှ လျှို့ဝှက်နက်နဲသောအရာအဖြစ် ယေရှုခရစ်၏ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖော်ပြသည်။ ၌ 1. တိမောသေ 3,16 ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “လူတိုင်းဝန်ခံရမည့်အတိုင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာသည် ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ဇာတိပကတိ၌ထင်ရှားသည်၊ ဝိညာဉ်တော်၌တရားသဖြင့်၊
ဇာတိပကတိဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်ကိုခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏အကြီးမားဆုံးဝိရောဓိ (= သိသာထင်ရှားသောဆန့်ကျင်ဘက်) ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဖန်ဆင်းရှင်သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုကိုဝန်းရံပေးသောဝိရောဓိများနှင့်သံချပ်များစာရင်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ကယ်တင်ခြင်းကိုယ်နှိုက်သည်ဝိရောဓိဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိသောလူသားများသည်အပြစ်ကင်းသောခရစ်တော်၌အပြစ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်အပြစ်ပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ယေရှုအတွက်ဖြောင့်မတ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်သားများဖြစ်သော်လည်းအပြစ်ကင်းမဲ့ပါသည်။
တမန်တော်ပေတရုက ရေးသားခဲ့သည်။ 2. ဓာတ်ဆီ 1,3-၄။ ဘုန်းတန်ခိုးတော်အားဖြင့် ငါတို့ကို ခေါ်တော်မူသောသူကို သိခြင်းအားဖြင့် အသက်နှင့် သနားခြင်းတရားသည် ငါတို့ကို ပေးဆောင်သော အရာခပ်သိမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အမြတ်နိုးဆုံးနှင့် အကြီးကျယ်ဆုံးသော ကတိတော်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဤလောက၌ သင်တို့သည် ဆိုးရွားလှသော အလိုဆန္ဒများမှ လွတ်မြောက်ပြီးသော နတ်သဘာဝ၌ မျှဝေခံစားနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။
ယေရှုကိုငွေ ၃၀ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သော်လည်းကမ္ဘာ့ရွေးနုတ်ဖိုးအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။
ခရစ်ယာန်များအတွက်လည်းဘ ၀ သည်နည်းလမ်းများစွာတွင်ဝိရောဓိဖြစ်နေသည်။
ပေါလုရေးခဲ့သည်။ 1. ကောရိန္သု 2,912 ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ မျက်စိမမြင်၊ နားမရှိ၊ အဘယ်သူ၏စိတ်နှလုံးသို့ မဝင်သေးသနည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ချစ်သောသူတို့အဖို့ ပြင်ဆင်ထားသောအရာ၊ ဘုရားသခင်သည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အားဘော်ပြတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားဦးခေါင်း၏ နက်နဲရာအရပ်အပါအဝင် အရာခပ်သိမ်းကို ရှာဖွေသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူ၌ရှိသော လူ၏ဝိညာဉ်မှတပါး၊ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၌ရှိသောအရာကို အဘယ်သူမျှမသိစေဘဲ၊ ငါတို့မူကား၊ ငါတို့အား ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအရာကို သိနိုင်စေခြင်းငှာ၊ ငါတို့သည် လောကီဝိညာဉ်မှတပါး၊
အမှန်မှာယုံကြည်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာသည်ကြီးလှ၏။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ ငါတို့ကိုချစ်သောခမည်းတော်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန်သားဖြစ်သည့်သားတော်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခမည်းတော်နှင့်သာမကအချင်းချင်းအချင်းချင်းလည်းမိတ်သဟာယဖွဲ့ခဲ့သည်။
ယောသပ်သည် Tkack ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်